‘निजि संग सक्ला ? साझा « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
‘निजि संग सक्ला ? साझा
८ मंसिर २०७४, शुक्रबार १४:४४ मा प्रकाशित
घोराही, ५ मंसिर।
सोकेशको माथि बाट जिल्ला बाहीरवाट आएका दैनिक पत्रिकाहरु लस्करै र्फिजेका थिए । डोरीमा जिल्लाका दैतिक पत्रिकाहरु टाढैबाट देखिने गरी टंगाएका थिए । ढाङ लगाएर टेवुलमा विभिन्न थरीका पुस्कत चा“चेर राखेका थिए । यहि वातावरणमा जनता बुक स्टल बैंक रोड घोराहीका सन्चालक रामभक्त गुप्त झुम्मीएका ग्राहक संग हास्दै कारोवार गरीरहेका भेटिन्थे ।
अधिकांं पुराना पुस्तकको थुप्रो थियो । कुर्सिदेखि याक सम्म जता छाम्दाखेरी पनि हातमा धुलो लाग्थ्यो । त्यहा“ विदा हुदै गरेका शोरुम ईन्चार्ज शुरेन्द्र भुषाल हिसाव किताव बुझाई रहनुभएको थियो । भर्खरै सरुवा भई आउनुभएका शाखा प्रमुख दुर्गा डा“गि ध्यान केन्द्रित गरेर बुझ्दै गर्नुभएको थियो । त्यहाको वातावरण्मा न कनुै उत्साह थियो न त नया पन नै देखिन्थ्यो ।
पहिलो भेटमै प्रमुख डागिले भाषा साहित्य र कलाको विकास साझा बाहेक अन्त बाट हुनै नसक्नै ठोकुवा गर्नुभयो । जसरी पनि साझालाई जोगाउन पुस सेल विधिबाट पुस्तक विक्री गरिने जानकारी दिनुभयो । साहित्यकार पत्रकारहरुलाई आकषित हुन र सहयोग गर्न अपिल गर्नुभयो । डागिको उत्साहले अहिल्यै केहि भईहाल्छ भन्ने सन्देश दिन्थ्यो । अब साझको रुप फेरिन्छ भन्न सकिन्थ्यो ।
लामो समय शोरुम ईन्चार्जको जिम्मेवारी पुरा गरेका भुषाल भने डागि बोलिरहेका शब्दमा सन्तुष्ट देखिनु हुन्नथ्यो । बरु अनुहारमा आक्रोशको लहर चल्थ्यो । यस क्षेत्रमा साहित्य चर्चाको शिखरमा पुगेको हो । भुषालका अनुसार डा कृष्णराज डिसिले साझाका कर्मचारी बोलाएर अन्तरर्वार्ता ल्याउनु हुन्थ्यो । साहित्यीक किताव साझामा मात्रै हुन्छन् भन्ने धारणा व्याप्त थियो । फोन बाट पुस्तकको माग आउथ्यो । पुस्तक पसलेहरु लिन आफै साझा सम्म पुग्थे ।
अहिले साझाको पहिचान बदलिएको छ । पुराना र थोत्रा पुस्तक पाईने स्थानका रुपमा साझा परीचित छ । भुषालका अनुसार तिन चार सय गरीमा पत्रिकाका ग्राहक थिए उनिहरुले पढ्न पाएनन् । विद्यालयमा लागु गरीएका पुस्तक साझाले पठाउन सकेन । भाडा तिर्न नसक्ने गरी विक्री घट्यो । फोन लाईन काटेको महिनौ भई सकेको छ । घर भाडा नतिरेका बर्ष नाघि सक्यो । सबै कर्मचारीले राजीनामा दिदा पनि झण्डै ६ महिना कर्मचारी विहिन भयो । यसरी अस्त व्यस्त अबस्थामा रहेको साझा प्रकाशन निजि संग प्रतिस्पर्धामा कहिले उत्रेला ? प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
निजि पुस्तक व्यवसायीका फुर्ति बढेका छन् । साझाले प्रकाशन गर्दै आएका धेरै पुराना पुस्तकहरु निजि प्रकाशनले लगि सके । अब साझा बाट प्रकाशित महत्वपुर्ण कृति भन्ने छटै छैन । जनता वुक स्टलका गूप्ताका अनुसार बजारमा नपाईने पुस्तक कुनै पनि छैन । यस अघि साझामा मात्रै पाईने पुस्तक विक्रि भईरहेका छन् । निजि प्रकासनले पठाईरहेका छन् । यसपटक धच गोतामेका तिनवास, सम्झनाका गल्छेडाहरुमा, घामका पाईला, यहा देखि त्यहा सम्म जस्ता कृतिहरु निजि प्रकाशनले दिने गरेको छ । पच्छिल्लो पटक चर्चामा आएका महको म, भुइया“, छाउघर लगाएत विभिन्न सामाजिक उपन्यास, जिवनी आत्मबृत्तँन्त निजि प्रकाशन वाट आईरहेका छन् । माग भएको तिन दिन भित्र वा काठमाण्डौमा विमोचन गरेको भोलिपल्ट पुस्तक दिन सक्ने गुप्ताले बताउनुभयो ।
पाठकहरु निकै बढेको उहाको भनाई छ । कम्युनिष्ट निकट पुस्तकको पहिचान पाएको प्रगति पुस्तक सदनले पनि निरन्तरता दिएको छ । सन्चालक शुसिला वैद्यका अनुसार दुई तिन रुपैयाका साना पुस्तक पनि छन् । भर्खर निश्केका विभिन्न प्रकाशनका नया पुस्तक पनि राखिएको छ ।
यसरी निजि पुस्तक पसलहरु धमाधम ग्राहक लोभ्याउनमा छन् । साझा प्रकाशन भने नियमित प्रकाशन गरीमा समेत दिन नसक्ने अवस्थामा छ । त्यस बाहेक नया पुस्तक लिन नसकिएको प्रमुख डागिले जानकारी दिनुभयो ।
पहिलाको हिसाव बुझाउने र केहि विक्री गरेर मात्रै नया माग गर्न सकिन्छ । सर्टर खोल्ने देखि माकेटिङ र शोरुम खोल्ने एकै जना भएकाले सोचे जति सम्भव छैन । तिन जना भएपछि सामान्यक ाम चलाउ हुने देखिन्छ ।क र्मचारी थप कहिले हुने पत्तो छैन । एक जनाले जति उफ्रीएपनि परिणाम देखिने मा निकै संका छ । यद्यपी प्रमुख डागिले आफुले परिवर्तन गरेरै छाढ्ने र त्यसमा सवैको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभएको छ ।